– कोरोना सिर्जित समस्याले समाजमा आर्थिक संकट गहिरिएको छ । र, भुक्तानीको दबाबमा चेक काट्दा बाउन्सका घटना बढेका छन् ।
– बालबालिकासँग नजिक भएर कानमा लगाएका गहना लुटेर भाग्ने, डलर साट्ने बहानामा कागजको मुठो थमाउने र रिभेन्ज पोर्नसम्मका घटना देखिन थालेका छन् । प्रहरीले लकडाउनयता बढेका नयाँ अपराध शैलीका रूपमा यिनलाई लिएको छ ।
-दैनिक सात बलात्कार : आव ०७६-७७ मा दुई हजार एक सय ४४ बलात्कार र ६ सय ८७ बलात्कार प्रयासका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । यो भनेको दैनिक औसत सातवटा घटना हुन् । आव ०७५-७६ मा यो संख्या तीन हजार १६ थियो । मानव बेचबिखन र बहुविवाहमा पनि कमी आएको छ । मानव बेचबिखनका मुद्दा अघिल्लो वर्ष दुई सय ४७ वटा रहेकामा पछिल्लो वर्ष एक सय ६४ मात्र छन् । बहुविवाहका मुद्दा पनि एक हजार एकबाट घटेर सात सय ३४ मात्र छ । ज्यानसम्बन्धी अपराध आव ०७५-७६ का ६ हजार नौ सय ९६ बाट बढेर सात हजार एक सय ५५ वटा छन् ।
-आत्महत्या दैनिक १७ : अन्य अपराधमा कमी आउँदा आत्महत्याका घटना बढेका छन् । आव ०७६-७७ मा ६ हजार दुई सय ४१ जनाले आत्महत्या गरेका छन्, जुन दैनिक औसत १७ जना हो । जेठयता दैनिक २० भन्दा बढीले आत्महत्या गरेको प्रहरी तथ्यांक छ ।
११ चैतदेखि ४ साउनसम्म दुई हजार दुई सय १८ आत्महत्याका घटना भएका छन् । तीमध्ये दुई सय ३५ जना १८ वर्षमुनिका बालबालिका छन् । आत्महत्याको मुख्य कारण डिप्रेसन भएको मनोचिकित्सक डा. कपिल उपाध्याय बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्थाले डिप्रेसन बढाउन सक्ने भएकाले आत्महत्या पनि बढ्न सक्छ,’ उनी भन्छन् ।
-सामाजिक मूल्य भत्किन सक्छ : राजेन्द्रसिंह भण्डारी. पूर्वएआइजी – धेरैजसो अपराधको मनसाय आर्थिक पक्ष हुन्छ । कोभिड–१९ का कारण मान्छे आर्थिक संकटमा परेका छन्, जसकारण अपराध वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो । समाजमा अब कानुनको अवज्ञा सुरु हुन्छ । त्यसले सामाजिक मूल्य मान्यतामा कमी आउँछ । सामाजिक मूल्य मान्यतामा ह्रास आउँदा आपराधिक प्रवृत्ति मौलाउँछ । यस्तो परिस्थितिमा मान्छेको सोच्ने शैली बदलिन्छ । विगतमा गलत लाग्ने कुरा अब सही लाग्न थाल्छ । र, सामाजिक–पारिवारिक अपराध बढ्न सक्छ । राज्यले पूर्वतयारी गरेन भने अपराध नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ । यसलाई रोक्न प्रहरीलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । त्यो भनेको प्रहरीको मनोबल बढाउनेदेखि स्रोत साधनमा लगानी गर्ने हो । प्रहरीलाई स्वतन्त्र चल्न दिएर व्यावसायिक बनाएपछि फिल्डमा उसको क्षमता देखिन्छ । कमजोर मानसिकताले प्रहरीले अपराध नियन्त्रण गर्न सक्दैन । सहर, गाउँ, राजमार्ग र सीमा क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्छ । रेड, एल्लो र ग्रिन जोन छुट्याएर पुलिसिङ गर्नुपर्छ ।
केही दिनयता महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बढेको भिडमा साझा समस्या भेटिन्छ, चेक बाउन्स । विभिन्न कारोबारबापत लिइएका चेक नसाटिएपछि बैंकिङ कसुरमा कारबाही माग गर्दै धाउनेको संख्या एक्कासि बढेको छ । ‘यो आर्थिक अपराध बढ्ने संकेत हो,’ परिसरका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर भन्छन्, ‘कोरोना सिर्जित समस्याले समाजमा आर्थिक संकट गहिरिएको छ । र, भुक्तानीको दबाबमा चेक काट्दा बाउन्सका घटना बढेका छन् ।’ ११ चैतदेखि २९ साउनसम्म काठमाडौं परिसरमा चेक बाउन्सका तीन सय ९२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
अपराध अनुसन्धानका विज्ञहरूको भनाइमा चेक बाउन्सका घटनाको कनेक्सन अपहरण र गुन्डागर्दीजस्ता संगठित अपराधसम्म हुने गर्छ । कानुनी उपचारमा जाँदा रकम उठाउन समय लाग्ने भएकाले मानिस गुन्डागर्दीमा संलग्न व्यक्तिसम्म पुग्ने तथा त्यसले अपहरण र हत्यासम्मका अपराधतिर डो-याउने विज्ञको भनाइ छ । ०६२–६३ को परिवर्तनलगत्तै बढेको संगठित अपराध केही वर्षयता स्वाट्टै घटेको थियो । पेसेवर अपराध कम हुँदा प्रहरीलाई हाइसन्चो थियो ।
लकडाउन खुुकुलो भएसँगै अपराध पनि बढेको छ । गत जेठमा देशभर दुई हजार तीन सय ९८ अपराध दर्ता भएकामा साउनमा बढेर तीन हजार ६ सय १८ पुगेको छ । यहीबीचमा अर्को नयाँ शैलीको अपराध देखिएको छ– घरआसपास एक्लै रहेका बालबालिकासँग नजिकिने र उनीहरूसँग खेलेकोजस्तो गरेर कानमा लगाएको सुन खोसेर भाग्ने । साउनमा मात्र यस्ता तीनवटा घटना भएका छन् ।
प्रहरीले यसलाई कोरोना संकटपछि देखापरेको अपराधको नयाँ शैलीका रूपमा विश्लेषण गरेको छ । भक्तपुर क्षेत्रमा अर्को नयाँ शैलीको अपराध फाट्टफुट्ट देखिन थालेको छ– डलरको बीचमा कागजको मुठो राखेर नेपाली मुद्रा साट्ने अनि फरार हुने । प्रहरी परिसरका अनुसार ८ साउनमा भक्तपुर मध्यपुरठिमी–९ बोडेमा एक युवकलाई फेसबुकबाट चिनजान भएकी युवतीले १० हजार डलर साट्ने भन्दै तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ ठगिन् । डलर प्राप्त हुने लोभमा परेका युवकले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ युवतीलाई दिए । युवती मोटरसाइकल चढेर फरार भइन् । युवकले खोलेर हेर्दा डलरजस्तो देखिने गरी कागजको मुठो थमाएको उजुरी ती युवकले प्रहरीमा दिएका छन् ।
छिमेकी भारतमा पनि सडकमा हुने लुटपाटजस्ता अपराध र साइबर ठगीका घटना ह्वात्तै बढेका छन् । अनलाइनबाट सस्तोमा सामान दिने भन्दै ठग्ने, वेबसाइट ह्याक गरेर पैसा असुल्नेजस्ता गतिविधि भारतमा बढेका छन् । भारतको अपराधको जालो र शैलीले नेपालमा पनि प्रभाव पार्दै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले आफ्ना सदस्य मुलुकका प्रहरीलाई पठाएको सर्कुलरमा कोरोना संकटले मानव बेचबिखनका घटना बढ्न सक्ने विषयमा सचेत गराएको छ ।
लकडाउनयता अनलाइन कारोबार बढेकाले त्यससम्बन्धी ठगी बढेको छ । यस्तै, निकटस्थ व्यक्तिकै गोप्य तस्बिर र भिडियो इन्टरनेटमा राख्ने ‘रिभेन्ज पोर्न’समेत नेपालमा देखिएको छ । रिभेन्ज पोर्नसम्बन्धी अपराधको आरोपमा २८ असारमा साइबर ब्युरोले गोंगबुका सुरज श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्‍यो । एक १७ वर्षीया युवतीसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि प्रतिशोध लिन उनको गोप्य भिडियो खिचेर पोर्न साइटमा अपलोड गरेका थिए ।
लकडाउनका कारण गत आर्थिक वर्षमा अपराधमा केही न्यूनीकरण देखिएको छ, तर आत्महत्या र सामाजिक अपराध बढेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा समग्र अपराधमा २.६७ प्रतिशतले कमी आएको छ । आव ०७५-७६ मा देशभर ४३ हजार ५१ वटा अपराध दर्ता भएकामा ०७६-७७ मा ४१ हजार आठ सय ९८ वटा मात्र छ । तर, ०७६ साउनदेखि फागुनसम्म अपराधको संख्या विगतमा भन्दा १० प्रतिशत बढी थियो । अपराध कम हुनुमा लकडाउन नै कारण देखिएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायत बताउँछन् ।
आव ०७५-७६ को फागुनमा तीन हजार पाँच सय ७१ वटा अपराधका घटना दर्ता भएका थिए । ०७६-७७ को फागुनमा वृद्धि भएर तीन हजार नौ सय ९८ पुग्यो । यस्तै, ०७५-७६ को चैतमा तीन हजार सात सय ७० घटना भएकामा ०७६-७७ मा दुई हजार चार सय सातवटा मात्र अपराध प्रहरीमा दर्ता भए ।
आव ०७६-७७ मा समग्र अपराध घटे पनि सामाजिक अपराध र आत्महत्यामा भने बढोत्तरी पाइन्छ । आव ०७५-७६ मा सामाजिक अपराध ११ हजार एक सय ८९ रहेकामा आव ०७६-७७ मा ११ हजार चार सय ८१ पुगेको छ । यसअन्तर्गत सार्वजनिक शान्ति, कुटपिट, सार्वजनिक हित र धर्मसम्बन्धी कसुर पर्छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन् ।